ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးသိန်းဆွေ အား မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တူရကီနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Kerem Divanliogul လာရောက် တွေ့ဆုံ ‹ အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးသိန်းဆွေ အား မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တူရကီနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Kerem Divanliogul လာရောက် တွေ့ဆုံ
အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသိန်းဆွေ သည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တူရကီနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Kerem Divanliogul အား ယနေ့နံနက် ၁၀၀၀ နာရီ အချိန်တွင် နေပြည်တော်ရှိ အဆိုပါဝန်ကြီးဌာန ၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၏ ဧည့်ခန်းမတွင် လက်ခံတွေ့ဆုံ ခဲ့သည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင်တူရကီ-မြန်မာပူးပေါင်း၍ နှစ်နိုင်ငံဆောင်ရွက်လျှက်ရှိသည့် ကိစ္စရပ်များ၊ မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်၍စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန်နှင့် အလည်အပတ်ခရီးလာ ရောက်မည့် တူရကီနိုင်ငံသားများအတွက် အခြားဥရောပသမဂ္ဂနိုင်ငံများ(EU)နည်းတူဆိုက်ရောက် ဗီဇာရရှိရေး ထည့်သွင်းစဉ်းစားပေးရန်၊ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းလက်ရှိ ဖြစ်ပေါ်နေသည့် အခြေအနေ များနှင့်ပတ်သက်၍ ဘင်္ဂလားဒေရှ် နိုင်ငံဘက်သို့ ရောက်ရှိနေကြသည့်သူများအား မြန်မာဘက်မှ ပြန်လည်လက်ခံရေးအတွက် အသင့် ပြင်ဆင်ထားရှိမှု အခြေအနေများ၊ UNHCR, UNDP တို့နှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်မှနေရပ်စွန့်ခွာ ထွက်သွားသူများ ပြန်လည်လက်ခံရေးဆိုင်ရာ နာလည်မှုစာချွန်လွှာ လက်မှတ်ရေးထိုး၍ ပြန်လည်လက်ခံရေး ဆောင်ရွက်နေသော အခြေအနေတို့တွင်ပါဝင် ကူညီ ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရေး၊ UNHCR နှင့် UNDP တို့မှကျေးရွာအုပ်စု(၃) အုပ်စုနှင့်ကျေးရွာပေါင်း (၂၃)ရွာအားသွားရောက်လေ့လာ ပြီးစီးမှုအခြေအနေများနှင့်ဆက်လက် ဆောင်ရွက်သွားမည့် အစီ အမံများ၊ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း ဘူးသီးတောင်၊မောင်တောဒေသတွင်ပြန်လည် လက်ခံရေးနှင့် ပတ်သက်၍ အခြေခံအဆောက်အဦများအဆင်မြှင့်တင် ဆောက်လုပ်မှုတွင် နိုင်ငံတော်မှ ဘဏ္ဍာငွေ များကိုလည်းတိုးမြှင့် သုံးစွဲထားပြီး အဆက်မပြတ် ဆောင်ရွက်ပေးနေမှု အခြေအနေများ၊ ရခိုင် ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း ဘူးသီးတောင်၊မောင်တောဒေသတွင် ဖြစ်ပေါ်နေသည့် ပြဿနာများအား ဖြေရှင်း ဆောင်ရွက်ရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံဘက်မှ လက်ရှိဆောင်ရွက်ချက်များကိုလည်း ပွင့်လင်း မြင်သာစွာချပြအသိပေးလျက်ရှိသဖြင့် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများမှ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ပေးရန် နှင့် အဆိုပါဒေသတွင်း ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ထောင်ရန် နှစ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်း အချင်းချင်း သဟဇာတဖြစ်စေရေးအတွက် ဝိုင်းဝန်းအကောင်အထည်ဖေါ် ဆောင်ရွက်သွားရေး ကိစ္စရပ်များ အပေါ်ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲသို့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး နှင့်အတူ အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဦးစီးဌာန ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်နှင့် တာဝန်ရှိ သူများ တက်ရောက်ခဲ့ကြကြောင်းသတင်းရရှိပါသည်။